UMaradona uthathwe isandla sikaNkulunkulu | Scrolla Izindaba
UMaradona uthathwe isandla sikaNkulunkulu
UMaradona, ongomunye wabadlali bebhola abahamba phambili kunabo bonke, ushone ngoLwesithathu eneminyaka engama-60.
UMaradona ubephethe i-Argentina ekuphumeleleni kweqembu eNdebeni yoMhlaba kowezi-1986, ekhiqiza uchungechunge lwemidlalo emihle.
Mhla zingama-22 ngoNhlangulana kowezi-1986, washaya igoli elihle kunawo wonke emlandweni weNdebe Yomhlaba Yebhola lezinyawo e-Azteca Stadium e-Mexico City ngesikhathi ethumela ibhola enethini ngemuva kokushiya abadlali abahlanu baseNgilandi nonozinti waseNgilandi.
Kodwa umdlalo waphazanyiswa yisigameko “sesandla sikaNkulunkulu” ngesikhathi uMaradona ebonakala ethinta ibhola lisendleleni eya enethini. Onompempe babengenawo umbono ocacile ngomdlalo futhi esikhundleni sokungavunyelwa kwegoli, lasiza i-Argentina yanqoba i-England ngamabili kwelilodwa.
I-Argentina yaqhubeka yanqoba iNdebe Yomhlaba. UMaradona washaya amagoli amahlanu futhi waba ngumdlali ovelele kulo mqhudelwano.
Umsebenzi wakhe njengomdlali wasesiswini ohlaselayo neqembu lesizwe uqale kusukela ngowezi-1977 kuya kowezi-1994 futhi wabuya wazophatha i-Argentina.
UMaradona wadlalela iBarcelona neNapoli ngesikhathi esebenza eqenjini, enqoba izicoco ezimbili ze-Serie A nohlangothi lwase-Italy.
Uphawu lwakhe, ukugijima kanye nokulawulwa kwakhe kwebhola okuhlukile kumenze umdlali ovelele emhlabeni wonke jikelele. Abaholi ababekhohlisa futhi benesitayela babebizwa ngoMaradona.
Ngemuva kokuthatha umhlalaphansi, uMaradona ulwisane nokuluthwa yizidakamizwa notshwala.
Wahlinzwa ihlwili legazi ebuchosheni ekuqaleni kukaLwezi. Ngemuva kwalokho kwamenyezelwa ukuthi uzokwelashelwa ukuncika otshwaleni.
Ushone ngoLwesithathu ephethwe yisifo senhliziyo isikhathi esingaphansi kwenyanga ngemuva kokuhlanganisa iminyaka engama-60.
Umthombo wesithombe: @footballstuff